Sago Mini Disguise Babies, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Mampahafantatra anao indray izahay momba ny rindranasa iray, amin'ity tranga ity, lalao iray, izay misy fotoana voafetra azo alaina maimaim-poana. Amin'ity fotoana ity dia miresaka lalao iray avy amin'ny orinasa Sago Toys izahay, orinasa iray izay nifantoka tamin'ny asany amin'ny famoronana rindranasa ho an'ireo ankizy kely ao an-trano, toa an'i Toca Boa. Amin'ity indray mitoraka ity ny rindranasa natolony hoentinay maimaimpoana dia ny zazakely Sago Mini Disguising, fampiharana izay manana vidiny mahazatra 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azo alaina maimaim-poana.
Sago Mini Disguise Babies dia mikendry ny ankizy hatramin'ny 5 taona ary hiarahan'ny ankizy kely mandritra ny ora maro hahafinaritra amin'ny famoronana akanjo, milalao amin'i Jack, Jinja, Harvey ary Robin. Ity fampiharana ity mety ho an'ny ankizy kely ny manomboka mianatra miakanjo Izy irery, iray amin'ireo lahasa izay sarotra indrindra ho azy ireo, ary fantatro izany tamin'ny zavatra niainako manokana. Amin'ity lalao ity, ny kely dia hanandrana fitambarana an-jatony eo amin'ny akanjo sy ny kojakoja, toy ny solomaso, satroka, volombava ... hahazoana vokatra izay hampiseho ny tsiky hafahafa amin'ireo ankizy kely.
Ity lalao ity dia mety indrindra ho an'ny ankizy eo anelanelan'ny 2 sy 5 taona, mba hahafantaran'izy ireo tsikelikely ny asa mafy amin'ny fitafiana ny tenany. Toy ny rindranasa rehetra an'ity mpamorona ity dia tsy mila karazana fifandraisana Wi-Fi ianao vao afaka mankafy azy. Inona koa Tsy misy karazana fividianana anaty rindranasa, na dokam-barotra mety hanelingelina ny sain'ny ankizy. Ny zazakely Sago Mini Disguise dia mitaky farafaharatsiny iOS 7.0 na taty aoriana, mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch ary mila mihoatra ny 50 MB amin'ny fitaovantsika hametrahana azy tsy misy olana.
Sago Mini Disguise Babiesmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Sago Mini Disguise Babies, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Google Maps no hilaza aminao ny toerana hijanonanao
Ny Headphone no valin-tenin'i Bragi amin'ny AirPods